May Nyane: မြသီလာ အလွမ်းပြေ(၃၈)
ဆရာမရေ ဇင်းမယ်ဆိုတဲ့မြို့လေးကို ရောက်ဖူးချင်သွားပါပြီ။ လွမ်းသူဆိုတဲ့ ၀တ္ထုလင့်လေး မေ့ကျန်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။
ရပ်မယ်ဆိုတော့လည်း မချင့်မရဲဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ ဆက်ရေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပေမယ့် နာကျင်စေမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ အားနာမိပြန်တယ်။ ဆရာမရေ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဝေမျှပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရတော့မှာပါပဲ..
GHRE ရဲ့စာသင်ကျောင်းတွေ ရှိတဲ့နေရာက ဖန်းင (Phang-nga) မှာပါ။ ဖူးခက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖန်းငက ဖူးခက်ရဲ့အပေါ် မြောက်ဖက်ပိုကျတဲ့ ပြည်နယ်တခုပါ။ ဖူးခက်မှာ အဲဒီလို မြန်မာ စာသင်ကျောင်းတွေ ကောင်းကောင်း မရှိသေးပါဘူး။ အမှတ်မှားမှာ စိုးလို့သတိပေးတာပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် မရပ်ပါနဲ့ ဆက်ဖတ်ချင်လို့ပါ။
Brain drain, brain dry ပြီးရင်တော့ brain die ပါပဲအမရေ့၊ ထွက်လာကာစ ကာလတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမရဲ့စိတ်သောက၊ အကျပ်အတည်းကို ခံစားလို့ရပါတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အသားမကျခင်မှာ ဒီလိုကြိုဆိုမှုတွေက ခိုးလို့ခုလု ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ၊
ဇင်းမယ်မှာ ရခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ အေးအေးလူလူ ရှိလှတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက ဖတ်ရတာ (အနည်းငယ်) အမောပြောစေ ပါတယ်၊
Btw…၃၈ ရဲ့အဆုံးသတ်ပုံကြောင့် ၃၉ အတွက် လည်ပင်းပိုရှည်ရသလို တပြိုင်တည်းမှာပဲ ကြိုလည်းမောနေ မိတယ်ဗျာ...။ :)
ရွာသားလေး.. ကို Boyz, ညီလင်းသစ်...
မောစရာတွေ များလို့ မရေးချင်ဘူးဆိုတာထက် အဝေးရောက်ဗမာတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေက သိပ်မကွာတာမို့လို့ မရေးချင်တော့တာပါ..
၃၉နဲ့ ၄၀မှာ တတ်နိုင်သလောက် ထည့်သွားပါ့မယ်..။
ကျမ သိပါတယ်..ဒါကြောင့် ဖူးကက်နားက ရွာလေးတွေလို့ ပြောထားတာပါ.. ကျောင်းတွေက ၉ကျောင်းရှိပြီး ဖန်င တရွာတည်းမှာ မဟုတ်ပါ..။ ၃၉မှာ ရေးပါဦးမယ်..။
ဆရာမရေ...အပိုင်း ၃၈ ရဲ့အဆုံးကိုဖတ်ပြီး အပိုင်း ၃၉ အတွက်ကြိုပြီးမောမိတယ် ။ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့သူက ပြန်မတွေးချင်တာတွေများများလာလို့ ဆက်မရေးချင်တော့ဘူးဆိုတာ ဟုတ်မှာပါ ။ စာဖတ်တဲ့သူက ဖတ်ရုံလေးဖတ်ရတာတောင်မှ သက်ပျင်းမောချမိတယ်။ ဆရာမ အမြဲတန်း အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေ ။
မေငြိမ်းက ဘယ်တုန်းက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ဖူးလို့ ဒီလို ထွက်လာရတာလဲ.. တဲ့။ ကျမ တခါမှ မစဉ်းစားမိဖူးတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ တဲ့..
ဆရာမ ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာလို့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ဘဲ ရင်ထဲမှာ နိုင်ငံအတွက် အမြဲတမ်း ရှိတဲ့ သာမန်လူတွေ အများကြီး နိုင်ငံနဲ့ အ၀ှမ်း ရှိနေတာ ကို မမေ့မလျော့ သတိရနေမိပါတယ်။ ထောင်ကျမှ တောခို မှ နိုင်ငံရေးလုပ်တာလို့ ထင်မိရင် ဘောင်ခတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ်လို့ပါ။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လုပ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေကို တန်ဖိုးထားမိပါတယ်။
ရိုးသားတဲ့စာကို ဖတ်လိုက်ရပြီလို့ ခံစားမိပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်ဖို့၊ ဖောက်ပြန်လွဲမှားနေတဲ့ စနစ်တခုကို တော်လှန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဟာ မတရားမှုကိုရွံ့မုန်းတဲ့၊ ယုံကြည့်ရာအတွက်ရဲရဲရင့်ရင့်လုပ်ဆောင်ဝံ့တဲ့ နှလုံးသားတခုရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ဆရာမရေ...ဖတ်လို.ကောင်းနေတုန်း ရပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော. နှမြောမိတာတော. အမှန်ပါ..ဒီအကြောင်းတွေမရေးတော့ရင်တောင် အားတဲ့အခါတော့ စာတွေဆက်ရေးပါအုံးနော်...
မ ရေ… နှလုံးသားနဲ့ ရေးရတာမို့တပိုင်းပြီးတိုင်း မောကျန်နေမယ့် မ ရဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်… ဒါကြောင့် ဆက်ဖတ်ချင်မိပေမယ့် မ နှလုံးသားတွေ နွမ်းရိနေမှာ စိုးလို့မပူဆာရက်တော့ပါဘူး… ဇင်းမယ်မြို့ လေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ မ ရယ်… အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ခွဲနေကြရပေမယ့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ဆင်တူရိုးမှား အငွေ့ အသက်လေးတွေရှိတဲ့နေရာဆို ပိုပျော်နေမိတာကိုက ကြီးမားတဲ့သံယောဇဉ်ကို ပြနေတာပဲမိုလား… မ ရေ… ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့ မ ရဲ့ စိတ်ကလေးကို သိပ်သဘောကျမိပါတယ်… နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ မြသီလာရဲ့ ဇာတ်လိုက်လေးတွေရဲ့ လက်ရှိပုံ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ဇာတ်သိမ်းပေးနော်…
အမရေ မိုးရွာပြီးရင်တော့ နေသာစမြဲပါ။ အေးချမ်းပါစေနော်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ညီမတို့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ မိုးမုန်တိုင်းတွေလွင့်စင်ပြီး နေသာတဲ့နေ့ကိုရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရတော့မှာပဲ။
မျက်စိထဲမှာ မြင်ယော လွမ်းဆွတ် သွားပါသည်။
Ama, Please continue as much as you can.
Sayama- I want to encourage you to keep writting your story because that is your experience how you struggle in part of your life which would be memorable for your generations.That is not only your reflection alone, it also reflection of the education system in our country. Your post is unvaluable to read. Keep going sayama, don't stop it.
I visit your village and read article likeadiary.
မဟာဝိဇ္ဇာအတန်း ကျောင်းသားတွေကို ဘာမဂ္ဂဇင်း ဖတ်လာသလဲဆိုတာကို မေးတော့ ဂမ္ဘီရ ဆိုတာလေးကို တွေ့မိတော့ ပြုံးမိပါတယ်။ ဆိုးလိုက်တဲ့ ကလေးတွေနော်။ ဆရာမကို စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာပဲ။
အစ်မရဲ့ ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ဆက်ရေးပါဗျာ။ မရပ်ပါနဲ့အုံးလားဗျာ။
မြသီလာကို အပိုင်း ၄၀ ပြီးရင် ရပ်တော့မယ်ဆိုတော့လဲ စိတ်မကောင်း...
ဆက်ရေးပါ လို့ တောင်းဆိုရအောင်ကလဲ
ဆရာမကို နောက်ထပ် စိတ်မပင်ပန်းစေချင်တော့တာက ရင်ထဲက စေတနာအမှန်...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲမှာ ဆန္ဒရှိလာလို့ ဆက်ရေးချင်စိတ်ရှိလာတဲ့ အချိန်မှာ ဆက်ရေးပေးပါလေ.. နော်...။ မျှော်နေပါ့မယ်...။